Kedu ndị bụ isi ụkpụrụ nke Amazon isiokwu ranking algorithm na-eji na omume?
A maara nke ọma na ụwa nke Nchọpụta Nchọpụta Ọgbara ọhụrụ nke oge a na-achịkwa ọdịnaya dị elu, na-atụgharị anya na nyocha ọchụchọ kwesịrị ekwesị. Mgbe a na-edozi ụzọ ziri ezi, ịhọrọ isiokwu kachasị mkpa ma ọ bụ nke kachasị asọmpi nwere ike ịmanye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ weebụsaịtị ọ bụla ma ọ bụ blog ruo n'elu ọchụchọ ahụ. Mana ọ bụrụ na ọbịbịa Amazon na-abanye, ihe niile bụ oke osisi dị iche iche. Ihe bụ na Amazon nwere ya isiokwu ogo algorithm (a makwaara dị ka K9). Ọ pụtara na ọ dịghị usoro eluigwe na ala nke ịga nke ọma maka isi engines engines (dị ka Google n'onwe ya, yana Yahoo, Bing, wdg), ọ bụghị ịsị ụdị pụrụ iche nke ụwa kachasị elu ecommerce n'ụwa - giochi acquatici in sicilia. Ma, olee otu esi achọpụta kpọmkwem ihe ndị na-eme ka ezigbo nyocha dị mma?
N'ụzọ dị mwute, ọ nweghị nyocha ọ bụla ga-ekpughe usoro ahụ ma ọ bụ ọbụna ndepụta doro anya nke na-ekpuchi ihe ọ bụla dị elu na-agụnye na usoro ha dị nro nke nchịkọta ọchụchọ. Ma mgbe ọ bịara Amazon na isiokwu igodo algorithm eji n'ebe ahụ, ihe na-anọgide na otu - nke ahụ ga-abụ ihe nchebe nchebe nke na-emebeghị ka ọ pụta ìhè n'ihi na ị nwere ike ịmalite ịzụ ahịa site n'aka ọ bụla. M na-ekwu na naanị otu ụzọ ị ga-esi nweta nkọwa zuru oke ma ọ bụ nke doro anya nke ụkpụrụ nduzi ndị na - achịkwa Amazon na - eji nyocha na - aga n'ihu n'ihu. Na nkenke, ihe kacha mma nke ndị na-azụ ahịa n'Ịntanet, ma n'elu SEO ka na-eji usoro mkpịsị aka eme ihe - nanị iji chọpụta ihe na-eme na Amazon, nke isiokwu nke isi okwu na isi ihe ndị ọzọ bụ isi nwere ike ịmalite - site naanị nwayọọ nwayọọ na-agbaso na atụmatụ ndị na-arụ ọrụ n'ezie.
Amazon na isiokwu ya bụ algorithm na-aga ịkụ nzọ n'elu ụkpụrụ abụọ dị iche iche na-agbanwegharị na arụ ọrụ ya na ihe ndị dị mkpa.
1. Ngosipụta nke arụmọrụ - ejiri iji nyochaa ngwa ahịa ma ọ bụ nkwenye nke ngwaahịa ọ bụla edepụtara na Amazon. N'etiti ndị ọzọ, karịsịa Pịa-Through-Rate, conversion, na ahịa na-aga nke ọma ka a ghọtara dịka ihe mmemme kachasị eme ihe n'ebe ahụ.
2. Ihe ndị dị mkpa - bụ ndị metụtara kpọmkwem okwu nke okwu okwu na ụzọ kwesịrị ekwesị nke ntinye ha n'ime ibe ngwaahịa. Na ebe a bụ isi ụkpụrụ nke Amazon na isiokwu ogo algorithm - karịsịa ndị na ngwaahịa dabara na shopper si rịọ ajụjụ query kasị mma niile na-awarded elu rankings.
Enweghị ihe ọ bụla ị ga - ekwu na Amazon na - agbaso usoro pụrụ iche maka ịkọwa okwu. Na algorithm na-emelite na mgbe niile n'echere na ndị na-azụ ahịa obodo. Ka o sina dị, ebe a bụ ụfọdụ ihe na-emetụta ụda ọchụchọ na Amazon nke nwere ike ịkọwa mgbe niile:
A na-ejikọta aha ngwaahịa na isi ihe dị mkpa nke na-ebu ike kachasị ike, n'ịbelata iwu nke dị mkpa;
Ikwu okwu nchịkọta ugboro agaghị abụ ihe na-emerụ ahụ n'ogologo ọkwa gị, mana nke a abụghị usoro zuru ezu iji mee ka ị nweta ihe ọ bụla dị na Amazon;
Iji okwu ndị dị ogologo na-ekwu okwu ogologo oge na-etinye n'ime akụkụ akụkụ ahụ gị nke ọma nwere ike ime ka ọganihu ogo gị dịkwuo mma;
Njikọ dị n'ime ka ka bụ akụkụ dị oké mkpa ebe a, ya mere jide n'aka na ịnweta nanị ngọngọ ederede njikọ kacha mma. N'ezie, ha kwesịrị ijere gị ozi maka ihe nkwalite ọdịnaya ma nwee ike imeziwanye ihe dị iche iche.